Maamulka gobolka Banaadir oo ka hadlay amniga iyo nadaafadda Muqdisho – Radio Muqdisho
Kulankan maanta ay wada yeesheen maamulka gobolka Banaadir iyo gudoomiyiyaasha degmooyinka gobolka ayaa waxaa shir gudoominayay key simaha gudoomiyaha gobolka Banaadir, iyadoo kulankana looga hadlayay xaaladda amniga ee magaalada Muqdisho.
Afhayeenka maamulka gobolka Banaadir C/fitaax Cumar Xalane oo kulanka ka dib la hadlay saxaafadda ayaa sheegay in kulanka diirada lagu saaray adkeynta ammaanka magaalada Muqdisho, iyadoo sidoo kalena ay la isla soo qaaday ahmiyadda ay leedahay iskaashi dhex mara bulshada iyo laamaha amniga dalka gaar ahaan kuwa ka howlgala gobolka Banaadir.
Mudane Xalane ayaa sidoo kale sheegay in kulanka sidoo kale looga hadlay bilic soo celinta magaalada Muqdisho,waxaana dhammaan dadka ganacsatada ah lagu amray in ay ka qeyb qaataan ilaalinta nadaafadda caasimadda dalka.
”Maanta laga bilaabo Muqdisho uma dulqaadan doonto nadaafad xumo ee dhamaan waxaa lagu amray hey’adaha ammaanka iney kala shaqeeyaan waaxda nadaafada isla markaana la ganaaxi doono cidii lagu arko iyadoo qashin ku shubeysa laamiga”, ayuu yiri afhayeenka gobolka Banaadir.
Kulankan maanta ay ku yeesheen xarunta aqalka dowladda Hoose ee Xamar xubnaha maamulka gobolka Banaadir ayaa imaanaya iyadoo degmooyinka qaar ee magaalada Muqdisho ay mudooyinkii dambe ay ka socdeen olole nadaafadeed oo lagu nadiifinaayo wadooyinka waa weyn ee magaalada Muqdisho.
Gaari watay Taariko been abuur ah oo la soo qabtay